लेखक: टोम्स क्विनोनेज
च्याम्पियन स्पटलाइट: करेन कानूनलाई भेट्नुहोस्
Tomás Quiñonez मा फ्रेवुअरी 23, 2022 द्वारा लिखित।
हामी सबैको एउटा मात्र जीवन छ। हामीले यसलाई के गर्ने? भीडभाड भएको सामुदायिक थिएटरमा एक स्टेजमा करेन लले उनको जवाफ पाए।
करेन ती व्यक्तिहरू मध्ये एक हुन् जसले आफ्ना मूल्यहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध गर्छन्। भर्खरै, उनले सामेल हुने प्रतिबद्धता जनाइन् MAF को Adelante सल्लाहकार परिषद (AAC), एक समिति जसका सदस्यहरूले MAF को लागि जागरूकता र आर्थिक सहयोग खेती गर्न प्रमुख भूमिका खेल्छन्। हामी उनको फराकिलो कौशलताबाट मात्र नभई उनको अझ ठूलो परिप्रेक्ष्यबाट पनि फाइदा लिन पाउँदा हर्षित छौं।
करेन जीवनका ठूला प्रश्नहरूबाट टाढिने व्यक्ति होइनन्।
प्रारम्भिक बीसको दशकमा क्यान्सर भएको निदान गरिसकेपछि, केरेनले यी प्रश्नहरूलाई कहिल्यै नआउने "कुनै दिन" मा छोड्न सकिनन्। उनको मूल मानहरू प्रारम्भमा परिभाषित गरिएको थियो र थप क्रिस्टलाइज गरिएको थियो जब उनले आफ्नो 10 वर्षको पतिको लागि टर्मिनल निदान प्राप्त गरे।
“मैले मेरो श्रीमान् एरिकलाई जीवनको अन्तिम १४ महिनामा साथ दिएँ; तीव्रताका साथ जीवन जिउने र जानाजानी अन्त्यलाई सुरूवात बिन्दुको रूपमा प्रयोग गर्दै," उनी सम्झन्छिन्।
अरू सबै भन्दा बढी, समुदायको मूल्यले यस समयमा करेनको जीवनलाई परिभाषित गर्यो।
एरिकको अवस्थाको उनको नेटवर्कमा शब्द फैलिएपछि, दम्पतीले आफूलाई हेरचाह, समर्थन र मानवताको वेबको केन्द्रमा भेट्टाए।
करेनले केही साथीहरू र परिवारलाई आवधिक स्वास्थ्य अपडेटहरू साझा गर्न एक निजी फेसबुक समूह सुरु गरे। चाँडै समूह 900 भन्दा बढी सदस्यहरूमा बढ्यो, प्रत्येक समर्थन प्रदान गर्न आफ्नो शक्तिमा जे पनि गर्न इच्छुक।
उनी भन्छिन्, "मैले सोध्न सक्छु र कसैले जवाफ पाउन सक्छु जस्तो लाग्यो," उनी भन्छिन्। "त्यो समुदायले जे पनि गर्न सक्छ।"
निदान भएको चौध महिना पछि, एरिकको मृत्यु भयो। करेनले आफू अहिले दुईवटा जीवन बाँचिरहेको भावनालाई प्रतिबिम्बित गरिन्। उनले आफ्नो बाँकी वर्षहरू हेरिन्, प्रत्येक दिन बहुमूल्य हुन थालेको थाहा थियो, र उनले संसारलाई के प्रस्ताव गर्ने भनेर सोच्न थालिन्।
अन्तरज्ञानले जवाफ दियो। आफ्नो पतिको निधन भएदेखि, करेनले आफूलाई परोपकार, उद्यम पुँजी, र स्वयंसेवा बीचको परम्परागत सीमाहरूलाई बेवास्ता गर्दै वैकल्पिक स्रोतहरूको सम्भावनातर्फ आकर्षित भइन्।
MAF जस्तै, करेनले समुदायको सेवामा सबैभन्दा राम्रो वित्तलाई काम गर्न सकिन्छ भन्ने महसुस गरे।
"एक साझा लक्ष्य वरिपरि मानिसहरूलाई संगठित गर्न यो कत्ति शक्तिशाली थियो मैले देखेको छु," उनले साझा गरे। "मैले सोचें, 'यदि संकट नभएको बेला समुदायहरू यसरी एकसाथ आए भने कस्तो देखिन्छ?'"
यो प्रश्नले करेनलाई इन्फिनिट कम्युनिटी भेन्चर्सको स्थापना गर्न अगुवाइ गर्यो, एउटा कोष जसले परोपकारी र निजी लगानीबाट "स्थायित्व, समान सशक्तिकरण, र कलाहरू मार्फत समुदायहरू निर्माण र सुदृढ गर्न" कोषमा आकर्षित गर्छ।
समाधान गरियो, करेनले आफ्नो बाँकी वर्षहरू समुदायको सेवामा काम गर्न लगाइरहेकी छिन्, उनले आफ्नो पतिको अन्तिम महिनाहरूमा प्रशस्त मात्रामा प्राप्त गरेको कुरालाई अगाडि बढाउँदै। उनी अहिले छायामा परेकाहरूका लागि आफूसँग भएको स्रोत, सीप र ज्ञानको सदुपयोग गरिरहेकी छिन्।
"मलाई समुदाय भनेको जब तपाइँ भन्नुहुन्छ, 'मलाई तपाइँका समस्याहरू मेरो आफ्नै रूपमा हेर्न दिनुहोस्, र मसँग भएका कुराहरू तपाइँसँग साझा गर्नुहोस्'," करेन बताउँछन्। "यो साँच्चै एकदम सरल छ।"
यसमा, हामी MAF मा आँखा देख्छौं। करेनले पहिलो पटक आफ्नो स्थानीय सामुदायिक फाउन्डेसन मार्फत MAF बारे सिके। MAF एक अनुदान प्राप्तकर्ता थियो र हामीले तुरुन्तै एक अर्कामा समुदायको साझा समझदारीलाई पहुँच गर्ने, सुन्ने, र प्रामाणिकतासँग जडान गर्ने निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा देख्यौं।
"एमएएफ टोलीले मात्र मलाई सम्पर्क गर्यो र सोध्यो, 'तिमी को हौ, र वित्तीय सशक्तिकरणमा तपाईको रुचि के छ?' मसँग गहिरो प्रशंसा छ र ठूलो तस्विर र स्थान अवसरहरू हेर्न सक्ने मानिसहरूसँग काम गर्न पाउँदा सधैं खुसी छु।
हामी करेनलाई माफिस्टाको रूपमा स्वागत गर्न पाउँदा उत्साहित छौं।
जबकि उनको अनुभव आफ्नै मा खडा छ, देखाउन को लागी करेन को जोश, साँचो अर्थ मा, MAF आत्मा को मूर्त रूप मा। आखिर, उनी आफैंले यो बाँचेकी छिन्।
उनले र उनको पतिले साझा गरेको अन्तिम प्रदर्शन फिडलर अन द रूफ थियो। एरिकले अर्केस्ट्राको नेतृत्व गरे र फिडलरको रूपमा स्टेजमा पनि थिए। उद्घाटन राति थिएटर खचाखच भरिएको थियो।
“मैले समुदायको अनुभव गरेको यो पहिलो पटक हो। मृत्युको बारेमा कुरा गर्न गाह्रो छ। तर हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भएर हेरचाह गर्न सजिलो छ। त्यसैले मानिसहरू देखा परे। म त्यो कहिल्यै बिर्सने छैन।"
अन्धकारमा फुल्ने सपनाहरू: क्रिस्टिनाको कथा
Tomás Quiñonez मा डिसेम्बर 14, 2021 द्वारा लिखित।
Cristina Velásquez inició un negocio durante कोभिड-१९ को महामारी। Mientras se cerraban industrias enteras, ella y su esposo vieron la opportunidad de hacer realidad su sueño।
Cristina se entrevistó con la MAFIsta Diana Adame para hablar sobre esa decisión, de cómo los Lending Circles de MAF la prepararon para los negocios y el poder que tenemos dentro de nosotros para hacer realidad nuestros sueños।
Cristina Velásquez ले एउटा व्यवसाय सुरु गर्नुभयो समयमा COVID-19 महामारी। सबै उद्योग बन्द हुँदा, उनी र उनको श्रीमानले आफ्नो सपनालाई कब्जा गर्ने मौका देखे।
क्रिस्टिना MAF को Lending Circles ले कसरी Blind-N-Vision सुरु गर्दै र थप कुराहरूका लागि MAFIsta Diana Adame सँग कुरा गर्न बसे।
निम्न कुराकानी लम्बाइ र स्पष्टताको लागि सम्पादन गरिएको छ।
डायना Adame: मेरो नाम डायना Adame हो। म यहाँ MAF मा काम गर्छु।
क्रिस्टिना भेलास्क्वेज: मेरो नाम Ana Cristina Velásquez हो। म मेरो दोस्रो नाम, क्रिस्टिना द्वारा जान्छु। म एल साल्भाडोरबाट हुँ। म चार महिनादेखि श्रीमानसँग मिलेर आफ्नै व्यवसाय चलाइरहेको छु। हामी ड्रेप पर्दाहरू निर्माण गर्छौं जसलाई मानिसहरूले रोमन शेडहरू भनेर चिन्न सक्छन्। म मेरो श्रीमान्लाई डिलीवरीमा कुनै पनि कुरा भन्दा बढी मद्दत गर्दैछु। उसले उत्पादन बनाउँछ र म डेलिभर गर्छु।
डायना: महामारीको समयमा किन व्यवसाय खोल्ने निर्णय गर्नुभयो?
क्रिस्टिना: हामीले मानिसहरूले हामीलाई के भन्दै थिए भनेर पत्ता लगाउन थाल्यौं - कि जब मानिसहरू बाहिर काम गर्थे, तिनीहरू घरमा धेरै थिएनन्। त्यसपछि उनीहरूले महसुस गर्न थाले कि त्यहाँ धेरै आवश्यक घर सुधारहरू थिए। पर्दाको माग बढ्न थाल्यो । र हामीले आफैलाई यसरी भन्यौं, वाह, यहाँ एक वास्तविक अवसर छ।
डायना: तपाईंले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्दा समाधान गर्नुपर्ने सबैभन्दा अप्रत्याशित चुनौती के हो?
क्रिस्टिना: वाह, मलाई लाग्छ कि हामीसँग पहिलो चुनौती भनेको ठाउँ पहुँच गर्नु थियो। सान फ्रान्सिस्कोको बारेमा कुरा गर्दै, त्यहाँ ठाउँ हुन सक्छ तर यो अत्यन्त महँगो छ। हामीलाई धेरै ठूलो ठाउँ चाहिन्छ, जुन हामी बसेको अपार्टमेन्टमा उपलब्ध थिएन।
डायना: तपाईंले आफ्नो ठाउँ कसरी फेला पार्नुभयो?
क्रिस्टिना: म सधैं भन्छु कि भगवानसँग सबै कुराको योजना र इच्छा थियो। मेरो एक साथी छ जसलाई मैले 15 वर्ष पहिले भेटेको थिएँ। उनी ब्यूटी सैलुनमा काम गर्छिन् । र, राम्रोसँग, मलाई थाहा थियो कि पसलको पछाडिको भाग भाडामा लिइएको थियो। यो अब निःशुल्क छ, यो अझै पनि भाडामा उपलब्ध छ। र मैले पहिलो कुरा सोधें, यो कति अग्लो छ? धेरै उच्च, उनले भनिन्। मैले उसलाई भनेँ, उत्तम! र यसरी मेरो श्रीमान् र म यसलाई जाँच गर्न गयौं र हामी यसको प्रेममा पर्यौं, यो हामीले गर्न चाहेको लागि उपयुक्त थियो।
डायना: सबै कुरा फाइनल भइसकेपछि, तपाईंले आफ्नो साथीसँग कुरा गरिसकेपछि, तपाईंले फेला पारेपछि पहिलो पटक आफ्नो अन्तरिक्षमा हिंड्दा कस्तो महसुस भयो?
क्रिस्टिना: भन्न धेरै गर्व छ, वाह, अन्ततः यो एक वास्तविकता हो। यो सपना थियो तर अब यो वास्तविक छ र हामी यसलाई छुन सक्छौं। यो सुन्दर छ। साँच्चै, म परमेश्वरलाई खुशी र कृतज्ञ महसुस गर्छु।
डायना: तपाईंले पहिलो पटक MAF को बारेमा कसरी सुन्नुभयो?
क्रिस्टिना: मलाई विश्वास छ कि यो 2015 मा फर्किएको थियो। कथा सुरु भएको थियो किनभने म क्रेडिट निर्माण सुरु गर्न चाहन्थे। यो मैले अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा राम्रो निर्णय थियो। त्यहाँ, तिनीहरूले मलाई अन्धकारबाट निकाले। मसँग राम्रो क्रेडिट थिएन र अब मसँग उत्कृष्ट क्रेडिट छ।
डायना: MAF का सेवाहरूले तपाईंको व्यवसायलाई कसरी प्रभाव पारेको छ?
क्रिस्टिना: मैले व्यक्तिगत पक्षमा के सिकेको छु, म मेरो व्यवसायमा आवेदन गर्दैछु। व्यवसाय चलाउन, तपाईंलाई ठूलो क्रेडिट चाहिन्छ। व्यक्तिगत क्षेत्रमा, यसले मेरो व्यवसायसँग केहि चीजहरू गर्नको लागि अलि बढी सजिलैसँग ढोका खोलेको छ।
डायना: यी सिकाइहरू धेरै मूल्यवान हुन्छन् जब तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो जीवनको अन्य क्षेत्रमा ल्याउनुहुन्छ, हैन? महान अभ्यासहरू। एउटा प्रश्न जुन म सोध्न चाहन्छु, MAF प्लेटफर्म कुन हो जुन तपाईको लागि सबैभन्दा सहज छ? तपाईले कुनबाट बढी फाइदा उठाउनुभएको छ?
क्रिस्टिना: मलाई लाग्छ मोबाइल अनुप्रयोग। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ एक पटक थियो, राती धेरै ढिलो कि मैले सबै मोड्युलहरू पूरा गरें किनभने मलाई लाग्छ कि तिनीहरू धेरै छिटो र व्यावहारिक थिए। र त्यसैले, मलाई [MyMAF] एप साँच्चै मन पर्छ।
आफ्नो सपनाहरु कब्जा
डायना: मेरो अन्तिम प्रश्न, क्रिस्टिना, यो हो: सपनाको साथ समान स्थितिमा रहेका अरूलाई के सल्लाह छ?
क्रिस्टिना: सपना सपना मात्रै रहनु हुँदैन । तिनीहरू वास्तविक बन्न सक्छन्। केवल हामीसँग तिनीहरूलाई वास्तविक बनाउने शक्ति छ, अरू कसैसँग होइन किनभने तिनीहरू हाम्रो सपना मात्र होइनन् तर हामी हाम्रो लागि, हाम्रा बच्चाहरू र हाम्रो परिवारको लागि चाहन्छौं। र त्यसपछि हामी भन्न सक्छौं, sí se puede। मैले प्रयास गरें र अब म प्रमाण हुँ कि, हो, sí se puede। म हिजो राती मेरो श्रीमानलाई गीत गाउँदै थिएँ। [गीत] यो एउटा सुन्दर गीत हो जसले सपनाहरू तपाइँका हुन् र तपाइँले चाहेको बेलामा तिनीहरूलाई साकार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा कुरा गर्दछ।
डायना: धेरै धेरै धन्यवाद क्रिस्टिना। ठिक छ, मलाई लाग्छ कि तपाई हामीलाई आज चाहिने प्रेरणा हुनुहुन्छ। म तपाईंका शब्दहरू हामीसँग साझा गर्नुभएकोमा कदर गर्दछु।
यदि तपाईंसँग एउटा सपना छ जुन तपाईं जीवनमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई समर्थन गर्न यहाँ छौं। हाम्रो जाँच गर्नुहोस् व्यापार माइक्रो लोन र वित्तीय सेवाहरू तपाईंको लागि उत्तम काम गर्ने उपकरणहरू फेला पार्न।
Si tienes un sueño que te gustaría hacer realidad, estamos aquí para ayudarte। nuestros परामर्श गर्नुहोस् micropréstamos comerciales y वित्तीय सेवाहरू para encontrar las herramientas que mejor se adaptenatus necesidades।
माग स्थायी परिवर्तन: नवीनतम DACA अदालत को फैसला को प्रतिक्रिया
Tomás Quiñonez मा अगस्ट 6, 2021 द्वारा लिखित।
Afteratumultuous nine years, DACA—and the immigrants it supports—are under attack. Again. On Friday, July 16,aTexas federal court ordered the DACA program to partially end. We’ve been here पहिले, र स्पष्ट भन्नुपर्दा, हामी थकित छौं।
हामी अनुभव बाट थाहा हुन्छ कि DACA कार्यक्रम प्राप्तकर्ताहरु लाई उच्च ज्याला सुरक्षित, एक शिक्षा को लागी, र उनीहरुको सपनाहरु को लागी काम गर्न मद्दत गरेको छ। यसबाहेक, यसको प्रभाव परिवार र प्राप्तकर्ताहरु को समुदायहरु लाई बाहिर लहर। वर्षौंदेखि, परिवारहरु, बिद्यार्थीहरु, र ब्यापार मालिकहरु हामीसंग DACA लाई उनीहरुको जीवनमा परेको प्रभाव साझा गरेका छन्:
Nine years ago, DACA was, at best, intended to beatemporary fix toabroken system,ahouse of sticks to hold the nation over while we layaconcrete foundation for lasting immigration reform. Defending the DACA program and यसको प्राप्तकर्ताहरुलाई समर्थन is crucial. However, it’s not enough. It’s time to end that fight for good.
यो सबै को लागी नागरिकता को लागी समय हो।
अब हाम्रो समय जोर, सुन्नु, र सबै कागजात बिहीन आप्रवासीहरु को लागी नागरिकता को लागी एक मार्ग पार गरेर वास्तविक, स्थायी परिवर्तन सिर्जना गर्ने समय हो। हामी लाखौं आप्रवासीहरु को लागी लडिरहेका छौं - 40४०,००० भन्दा बढी DACA प्राप्तकर्ताहरु सहित - जसले हाम्रो देश को बिरामीहरुको हेरचाह गर्न, हाम्रो देश को परिवारहरुलाई खुवाउन, र महामारी को दौरान हाम्रो देश लाई अगाडि बढाउन को लागी अगाडी बढे। तिनीहरू हुन्, र सधैं भएको छ, आवश्यक छ।
हामीलाई कारबाही चाहिन्छ। यहाँ पाँच चीजहरु तपाइँ आज गर्न सक्नुहुन्छ एक फरक बनाउन को लागी। पछिल्लो फैसला पछि आप्रवासी समुदायहरु को माध्यम बाट भय र अनिश्चितता को लागी, प्रत्येक कार्य मामिला छ।
कसरी DACA प्राप्तकर्ताहरुलाई समर्थन गर्ने
1. MAF को बारेमा शब्द फैलाउनुहोस् DACA शुल्क सहायता
यस समयमा, वर्तमान DACA स्थितिहरु वैध रहन्छन्, र नवीकरण आवेदन प्रशोधन गर्न जारी रहनेछ। MAF सुनिश्चित गर्न को लागी प्रतिबद्ध रहन्छ कि $495 दाखिल शुल्क एक बाधा छैन। यदि तपाइँ तपाइँको DACA स्थिति नवीकरण गर्न को लागी योग्य हुनुहुन्छ, दाखिला शुल्क कभर गर्न को लागी MAF को DACA शुल्क सहायता को लागी पूर्व आवेदन। यदि तपाइँ पहिलो पटक DACA आवेदक हुनुहुन्छ, हामी तपाइँलाई एक विश्वसनीय परामर्श गर्न को लागी प्रोत्साहित गर्दछौं कानूनी सेवा प्रदायक तिम्रो केसको बारेमा
यदि तपाइँ कसैलाई थाहा छ जो नवीकरण को लागी योग्य हुन सक्छ, कृपया उनीहरुलाई आवेदन दिन आमन्त्रित गर्नुहोस्! यी ग्राहकहरु जो हालै मा MAF को DACA शुल्क सहायता प्राप्त गरेका छन् बाट केहि कथाहरु छन्।
"यो अनुदान मेरो लागी महत्वपूर्ण छ किनकि यसले मलाई सुरक्षित रुपमा आफु र मेरो परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न जारी राख्न अनुमति दिनेछ। DACA र सम्बद्ध वर्क परमिट को माध्यम बाट म एक क्यारियर को अभ्यास गर्न को लागी सक्षम छु जुन म कर्मचारी लाभा र अधिकार को हकदार छु। - डेलिया
"यस अनुदानले मेरो परिवारलाई धेरै मद्दत गर्दछ कि मलाई मेरो DACA नवीकरण गर्न को लागी सक्षम हुन को लागी अन्य भुक्तानी मा पछाडि पर्न को लागी सक्षम हुन को लागी। यसले केहि तनाव कम गर्नेछ हामीसँग अहिले मेरो नविकरण कसरी तिर्ने भनेर सोच्ने कोशिश गरीरहेको छ। यो एक ठूलो अवसर हो किनकि मँ एक भुक्तानी योजना मा फिर्ता तिर्न सक्षम हुनेछु जसले हामीलाई यो गर्न को लागी धेरै धेरै सुलभ बनाउँछ। - ग्लोरिया
"यो अनुदान मेरो लागी साँच्चै महत्वपूर्ण छ त्यसैले म मेरो DACA कार्ड संग जारी राख्न सक्छु र काम गर्न को लागी सक्षम हुन सक्छु र मेरो आमा बुबालाई बाहिर मद्दत गर्न सक्छु, म पनि पैसा फिर्ता गर्न को लागी स्कूल जान्छु र मेरो क्यारियर को साथ एक प्रि-स्कूल हुन जारी राख्न चाहन्छु। शिक्षक। ” - यारित्जा
2. सेयर गर्नुहोस् विश्वसनीय जानकारी
यो थाहा पाउन गाह्रो हुन सक्छ र के गलत सूचना को एक युग मा भरोसा गर्न को लागी। यही कारणले गर्दा हामी DACA मा नवीनतम जानकारी संग एक संसाधन सिर्जना। यदि तपाइँ कसैलाई थाहा छ जो सोचिरहनुभएको छ कि टेक्सासमा भर्खरको सत्तारुढ उनीहरुको लागी के हो, कृपया साझा गर्नुहोस् यो पृष्ठ।
मुख्य टेक-अवे: USCIS पहिलो पटक आवेदकहरुलाई DACA स्थिति प्रदान गर्दैन यदि उनीहरुको आवेदन १ already जुलाई, २०२१ भन्दा पहिले नै अनुमोदित भैसकेको छैन।
3. सम्पर्क गर्नुहोस् कांग्रेस
हामी तपाइँलाई सबै आप्रवासीहरु को लागी नागरिकता को लागी एक मार्ग को माग को लागी आज कांग्रेस को तपाइँको सदस्य लाई सम्पर्क गर्न मा सामेल हुन को लागी प्रोत्साहित गर्दछौं। सीनेटले पहिले नै आफ्नो बजेट संकल्प मा वैधानिकता समावेश गरीएको छ, अब यो प्रतिनिधि सभा मा निर्भर गर्दछ। तपाइँको प्रतिनिधि लेख्ने एक छिटो, सजिलो, र प्रभावकारी तरीका तपाइँको आवाज सुन्न को लागी हो। यो संसाधन एक पत्र पहिले नै तपाइँको लागी ड्राफ्ट गरीएको छ! तपाइँको पत्र ASAP पठाउन निश्चित हुनुहोस्।
4. साइन एक याचिका
युनाइटेड वी ड्रीम बाट एक अनलाइन याचिका मा तपाइँको नाम जोड्नुहोस्। यो याचिका सांसदहरुलाई आग्रह छ कि अगस्त मा कांग्रेस छुट्टी मा जानु अघि मेलमिलाप प्याकेज मा सबै कागजात बिहीन आप्रवासीहरु को लागी नागरिकता को लागी एक मार्ग शामिल गर्न को लागी।
यो हाम्रो सामूहिक शक्ति मा खडा हुन र सबै को लागी नागरिकता एक वास्तविकता बनाउन को लागी पहिले भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एक मार्ग को माग गर्न कांग्रेस को आफ्नो सदस्यहरुलाई आग्रह एक याचिका हस्ताक्षर गर्नुहोस् 1TP3 नागरिकता4सबै. #HomeisHerehttps://t.co/n3vBGEYxtq
- Mission Asset Fund (FMAFpajarito) अगस्त २, २०२१
5. दान गर्नुहोस् MAF को DACA शुल्क सहायता अभियान को लागी
$495 दाखिल शुल्क युवा आप्रवासीहरुलाई आफ्नो आवेदन नवीकरण गर्न बाट रोक्नु हुँदैन। हामी एक राष्ट्रिय अभियान संगै आंशिक र पूर्ण अनुदान प्रदान गर्न को लागी सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता संग DACA प्राप्तकर्ताहरु को लागी आवेदन लागत कभर गर्न को लागी कदम चाल्दै छौं। तर हामी एक्लै गर्न सक्दैनौं।
हामीले पहिले नै १TP2T1 मिलियन उठाएका छौं। हामी संग जोड्नुहोस् र हामीलाई हाम्रो पहुँच दोब्बर बनाउन मद्दत गर्नुहोस्। आज आप्रवासीहरु संग खडा हुनुहोस्।
MAF आप्रवासी समुदाय संग खडा गर्व छ। कसरी देखाउन र आप्रवासीहरु को लागी अधिक गर्न को लागी नवीनतम अपडेट को लागी सोशल मिडिया मा हामीलाई पछ्याउनुहोस्।
यसलाई फर्वार्ड गर्दै: नैन्सीको कथा
Tomás Quiñonez मा जुलाई 1, 2021 द्वारा लिखित।
नैन्सी अलोन्सो अप्रत्याशितको लागि कुनै अपरिचित होइन। दक्षिणी क्यालिफोर्निया निवासी उनको चुनौतीपूर्ण र दुखद तूफानको भन्दा बढी उनको सामना गरेको छ। ती सबै मार्फत उनी अगाडि बढिरहेकी छ, कप्तानले के गरिरहेकी छ उनले आफ्ना दुई बच्चाहरु संग मिसाएर अगाडि बढ्नको लागि।
नैन्सीको कथा, यसको मूल मा, कसरी वित्तीय प्रणाली कडा परिश्रम गर्ने मान्छे को सपना मा बेसी मा आफूलाई विकृत गर्न सक्छन् वर्णन गर्दछ। यसले समुदायलाई स्वतन्त्र गराउनको लागि कुञ्जी कसरी हुन सक्छ भनेर पनि देखाउँदछ।
नन्सी २१ वर्षको हुँदा उनीहरूको पहिलो बच्चा भएकोले उनी र उनको श्रीमान्‌ले जीवनको दौडमा पहिलेको घुमफिरमा प्रवेश गरेका थिए।
उनीहरूले प्रत्येक डलरलाई अर्को महिनाको पेचेकमा तन्काए, कहिलेकाँही सास फेर्न कोठाको साथ। धेरै जसो, तथापि, त्यहाँ पार गर्न बाधाहरू थिए। के तिनीहरूले भर्खरको मेडिकल बिल वा हप्ताको किरानेहरूको लागि तिर्नुपर्छ?
न्यान्सी र उनको पति दुबै कडा परिश्रम गरे, र दुबै अन्त पूरा गर्न हतार गरे। ऊ आफ्नो चचेरो भाईको रेष्टुरेन्टमा बेच्नको लागि कार्डबोर्ड उठाउँथ्यो। उनी आफ्ना दुई बच्चाहरूको आउटग्राउन कपडा लिएर थप नगदीका लागि फ्लाई मार्केटमा लग्छिन्। उनीहरूले गर्नुपर्ने कुरा गरे।
यद्यपि अर्को तत्काल अवरोधको किनारहरू भन्दा टाढा, सपनाको एक क्षितिजले तिनीहरूलाई अगाडि बढायो। न्यान्सी र उनको लोग्नेले त्यस क्षितिजमा आफ्नै बसेको घर देखे। एक दिन, उनीहरूलाई थाहा थियो, उनले चिकित्सा सहायकको रूपमा काम गर्न आफ्नो खुद्रा जागिर छोडिदिने छिन। त्यसोभए उनीहरू अवसरका लागि मात्र होइन, तर सबै समयमा सास फेर्न सक्षम भए। दिनदिनै बर्ष, तिनीहरू एक अर्काको साथ कुनै बाधा अति ठूलो थिएन भनेर थाहा पाउँदै अगाडि बढिरहे।
त्यसोभए, अक्टुबर 9th, २०१ 2019 मा, न्यान्सीले अस्पतालबाट कल प्राप्त गर्यो।
एक महिना पछि, उनको श्रीमानको मृत्यु भएको थियो।
एक चकाचौंधमा, नैन्सी स्यान यिसिड्रोमा आफ्ना आमाबाबुसँग फर्किए किनभने संसार उनको वरिपरि सुस्त गतिमा सर्दैथ्यो। उनी आफ्नी छोराको साथ अस्थिर ओछ्यानमा बाँडिरहेका थिए। उनलाई २०V२ मा जून २०१० मा बुबाको स्ट्रोकले आफ्नो परिवारलाई सहयोग गरी कविड १ p महामारीमा प्रवेश गर्‍यो। यो बिस्तारै-बिस्तारै, उनले आफ्नो टुटेको जीवनको कवचहरू लिन थालिन् र नयाँ मोजेक निर्माण गर्न शुरू गरे उनको भविष्यको।
उनको श्रीमान्, यो पत्ता लाग्यो, एक विनम्र जीवन बीमा नीति थियो। उनीले यसको बारेमा कहिले पनि थाहा पाइनन् किनभने उनीहरूले कहिल्यै वित्तको बारेमा कुरा गरेनन्। अब अन्तमा उनले घर किन्न सक्छिन्। तर जब उनी एक धितोमा छलफल गर्न .णदाताकहाँ गइन्, उनीले थाहा पाए कि उनीसँग न्यून क्रेडिट स्कोर छ र योग्य हुन सकेन। उनले आफ्नो उधारमा कहिल्यै हेवा गर्दिनिन, यो पनि विनाशकारी समाचार थियो।
न्यान्सी अडिग थियो।
एक वित्तीय विचार कि एक पछाडि विचार भन्दा बढी कहिल्यै अब खण्ड उनको र एक जीवनभर सपना बीच खडा थियो। उनी आफ्नो खुट्टामा फिर्ता पाउन निजी अपार्टमेन्टमा पनि देखिन्। यद्यपि, सबैले अनुपात भाँडामा २-x गुना आम्दानी चाहिन्छ र उनीले आफ्नो पतिले छोडेको तलब भर्न सक्षम भएकी थिइनन्। उनका बच्चाहरूलाई अझै पनि हेरचाहको खाँचो पर्‍यो र उनको अघिल्लो चिकित्सा सहायक प्रोग्राम उसले आशा गरेको भन्दा कम विश्वसनीय थियो। नैन्सी अन्तत: सम्भावनाको ढोकामा थिइन, तर उनको पछाडि समात्ने अवरोध उनले सामना गर्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। र यस पटक उनी एक्लै थिइन।
"कसैले मलाई कासा परिचितको बारेमा भनेको थियो," न्यानसीले भने। “उनीहरूले मेरो क्रेडिट स्कोर सुधार गर्न मद्दत गर्न एक कार्यक्रम उल्लेख गरे। तर तिनीहरू अझ धेरै छन्। ”
सान डिएगोमा आधारित सामुदायिक सेवा संस्था कासा परिचितले नैन्सीलाई उनको पहिलो लेन्डि C सर्कल प्रोग्राम मध्ये एकमा ल्याए।
उनी आफ्नो स्कोर बढाउन एक LC मा सहभागी भए र छिट्टै गर्न सक्षम थिइन्। Months महिना पछि, न्यान्सीले आफ्नो क्रेडिट स्कोर ११8 अ by्कले बढाई।
त्यसपछि उनले प्रश्नहरू सोध्न थालिन्। र कासा परिचित टोलीसँग उत्तर थियो। उनीहरूले नान्सीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषहरू पहुँच गर्न मद्दत गरे जुन उनलाई कहिल्यै थाहा थिएन, वित्तीय योजनामा स्रोतहरू साझा गर्छिन् र उनको आमाबाबुको लागि COVID-19 खोपहरूको तालिकामा सहयोग पुर्‍याउँदछ।
उनी भन्छिन्, "मैले गरेको प्रत्येक सानो कुरा, तिनीहरूले मलाई मद्दत गर्छन्।" "यदि यो उनीहरूको लागि होईन भने मलाई कहाँ सुरु गर्ने भनेर पनि थाहा भएन।"
आज, नैन्सी एक धितो धितोको लागि योग्य हुन उनको क्रेडिट स्कोर वृद्धि गर्न ट्र्याकमा छ र एक चिकित्सा सहायक को रूपमा काम सुरक्षित गर्न को लागी काम गरीरहेको छ।
जे होस् उनका श्रीमान उनीसंग छैनन्, उनी सपनामा बोक्दछन् उनीहरूले सँगै राखेका सपनाहरुमा दिनदिनै उनीहरु क्षितिजतिर हेर्दै उनीहरु स्पष्ट देख्न चाहन्थे। त्यहाँ अझै धेरै बाधाहरू पार गर्न बाँकी छ, र न्यान्सी दृढ छ कि कुनैले उनलाई रोक्दैन। जे भए पनि ऊ एक्लो छैनिन।
"कासा परिचितमा मारियाना मलाई बोलाउँछिन् उनी आश्चर्यचकित छिन्," न्यान्सी बताउँछिन्। "किनभने मैले मेरो सबै भुक्तानीहरू समयमै गरिरहेको छु, उनले मलाई कैसर अनुदानबाट $500 को बोनस दिए। म रोएँ किनभने मैले मेरा आमा बुबालाई अझ धेरै मद्दत गर्न सकें। हामीमा घटेका सबै नराम्रा चीजहरूका लागि राम्रा चीजहरू पनि भए। ”
न्यान्सीले प्रश्नहरू सोध्दै छिन्, कसरी नयाँ संसारको मार्गनिर्देशन गर्ने भन्ने कुरा सिकेर आफ्ना बच्चाहरूलाई कडा-जितेको ज्ञान दिँदै। १ way र १.। उनी आशा गर्छिन् कि उनी जीवनको दौडमा टुक्रिने छिन्। यति लामो समय सम्म।
जेसुकै होस्, बच्चाहरूसँग पहिले नै आफ्नै एउटा अमूल्य उपहार छ; सपनाको पछि लाग्ने ग्रिट र इस्पात संकल्प। यो पैतृक सम्पत्ति न्यान्सी र उनका पति सँगै मिलेर आएका थिए।
COFID-19 संकटको समयमा आप्रवासी परिवारहरूलाई सहयोग गर्न MAF लाई $45 मिलियन प्रदान गरियो। यो अझै पर्याप्त छैन - कांग्रेसले कार्य गर्नै पर्दछ।
Tomás Quiñonez मा मार्च 16, 2021 द्वारा लिखित। एक टिप्पणी छोड्नुहोस्
एमएएफको राष्ट्रव्यापी COVID-१ Rap रैपिड रिस्प्स अभियानको निर्माणमा, समाजसेवी म्याकेन्जी स्कटले महामारीको शिकार भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष राहत दिन MAF १TP2T45 मिलियन प्रदान गरे। म्याकेन्जी स्कटको उदार उपहारले एमएएफलाई मद्दतबाट वञ्चित आप्रवासी परिवारहरूलाई वित्तीय राहत प्रदान गर्न जारी राख्न सक्षम गर्दछ। पछिल्लो बर्षमा, एमएएफले weather 48,०००+ व्यक्तिलाई सीधा नगद सहयोग वितरण गरिसकेको छ उनीहरूलाई स weather्कटको मौसममा सहयोग पुर्‍याउन - र आज यस संस्थाले अझ बढी गर्न तत्पर रहेको छ।
यी प्रयासहरूको बाबजुद पनि, एमएएफ जस्ता एकल संगठनको पहुंच यति नजिक छैन कि संघीय राहतबाट बाहिरिएका लाखौं आप्रवासी परिवारहरूले सामना गर्नु पर्ने विस्मयकारी आर्थिक विनाशलाई पूर्ण गर्न सकिएन। हामीलाई अन्तिम र कम्तिमा दिगो रिकभरीको अंश हो भनेर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व र कार्य आवश्यक छ।
सुरक्षा परिवारलाई सबैभन्दा बढी चाहिएको जाल विस्तार गर्न क recent्ग्रेसले भर्खरका महिनाहरूमा अर्थपूर्ण कदम चालेको छ.
डिसेम्बर २०२० COVID राहत बिल र २०२१ अमेरिकी उद्धार योजना २०२० CARES ऐनलाई छोडेर मिश्रित-घरपरिवारका million० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई वित्तीय राहतको सबैभन्दा नयाँ चरणहरू विस्तार गरियो। अझै, एक अनुमान ११ करोड आप्रवासी परिवारका मानिसहरूलाई सहयोग गर्नबाट वञ्चित गरिन्छ भने पनि उनीहरूले अर्थव्यवस्थालाई जरुरी काममा राखेका छन्।
"बाह्र बर्षदेखि मेरो कर बुझाउने एक अकुशल व्यक्ति भएको कारण यो स्वीकार्न गाह्रो भएको छ कि जब हामी संघर्ष गर्दछौं हामी कुनै चीज फिर्ता पाउन असमर्थ छौं।"
जुआन, द्रुत प्रतिक्रिया अनुदान प्राप्तकर्ता
यो बहिष्करण त्यस्तो समय आउँछ जब हाम्रो अर्थव्यवस्था आवश्यक कामदारहरूको काँधमा टिकी रहन्छ जो महामारीको मौसममा सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि उनीहरू पीडित छन्। उच्च दर COVID संक्रमण र मृत्यु को। आवश्यक कामदारहरू आप्रवासी कामदारहरू हुन् र धेरैलाई राहतको पहुँच छैन। उनीहरु भोक लागेको छ, झर्दै भाडामा पछाडिहराइरहेको छ मासिक बिल आफ्नै कुनै दोष को लागी।
बढी गर्नु पर्छ।
संकटको यस घडीलाई पूरा गर्न, क्ग्रेसले असाध्यै राहतको लागि अग्रसर हुनुपर्दछ र सबैलाई समावेश गर्नुपर्दछ, अध्यागमन स्थितिलाई ध्यान दिएर। गत बर्षमा, हामीले देख्यौं कि कसरी COVID-19 महामारीको स्वास्थ्य र आर्थिक लागत असमानतामा सीमान्त, बहिष्कृत, र अदृश्य रूपमा घट्यो। क्ग्रेसले सबै आप्रवासीहरूलाई सहयोग विस्तार गर्नुपर्नेछ, इक्विटी फ्रन्ट र सेन्टर राख्दै कम्तीमा र अन्तिममा राहत प्रदान गर्नुपर्दछ। इक्विटीमा यो जानाजानी ध्यान एमएएफको तीव्र प्रतिक्रिया कोषको केन्द्रबिन्दु हो, र यस माध्यमबाट संस्थाले लगभग १ टीटीपी T० करोड प्रत्यक्ष नगद सहयोग प्रदान गरेको छ।
“हामीले स्केलेबल प्लेटफर्महरू, सान्दर्भिक उत्पादनहरू र कम आय र आप्रवासी परिवारहरूको आर्थिक सुरक्षा सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउन समुदायमा आधारित संगठनहरूको राष्ट्रिय नेटवर्क निर्माण गर्न १ 14 बर्ष बित्यौं। अब, हामी आफ्नो प्लेटफर्मलाई पाइपको रूपमा प्रयोग गर्दै छौं प्रभावकारी ढ dignity्गले र मर्यादाका साथ राहतको चुचुरो पानी वितरण गरिएको सबैभन्दा हातमा परेका व्यक्तिहरूलाई, जसलाई अस्वीकार गरिएको छ र बिर्सिएको छ। ”
MAF सीईओ जोसे Quiñonez
MAF को क्षमता छिटो कार्य गर्न र मापन गर्न को लागी एक सीधा परिणाम हो साझेदारहरु संग जो छ र यसको छायाँ मा छोडेको सेवामा राम्रो टेक्नोलोजी र वित्तको उत्तम लाभ उठाउने आफ्नो दृष्टिकोणमा विश्वास गर्न जारी राख्दछ। तिनीहरूको निरन्तर समर्थनले एमएएफलाई उनीहरूको जटिलता र मानवताको पूर्णतामा उनीहरूलाई भेट्ने नयाँ तरिकाहरू अग्रसर गर्न सक्षम गरेको छ। एमएएफले अब यो इक्विटी केन्द्रित काम विस्तार गर्दैछ कम आय र आप्रवासी परिवारलाई प्रत्यक्ष अभूतपूर्व संकटको बेला मद्दत गर्ने।
एमएएफले छायाँमा समर्पित परिवारका लागि थप गर्न तत्काल र दृढ विश्वासका साथ देखाएकोमा म्याकेन्जी स्कटको सराहना गर्दछ। अब समय आयो कांग्रेसले पनि त्यसो गर्ने।
आप्रवासीहरू आवश्यक छन्, आफ्नो जीवनलाई जोखिममा पार्न यस महामारीको बेलामा हाम्रो देशलाई लामो राख्न।
उनीहरूले हाम्रोलागि कदम चालेका छन, र अब हाम्रो पालो तिनीहरूका लागि कदम बढाउने पालो हो। यदि हामी वास्तवमा सुधारको लागि अझ स्थायी र समृद्ध मार्ग चाहन्छौं भने, कांग्रेसले संरचनात्मक अवरोधहरू हटाउनु पर्छ जुन जनताको क्षमताको बाटोमा तिनीहरूको पूर्ण आर्थिक क्षमतामा पुग्न लामो समयदेखि खडा छ।
आज, हामीसँग तालिकामा एउटा मात्र होइन, पाँच प्रस्तावहरू छन् जसले हामीलाई त्यहाँ पुग्न मद्दत गर्दछ। हामीसँग प्रस्ताव छ कि लाखौं सपना देख्नेहरू, अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) होल्डरहरू, खेतालाहरू, र आवश्यक कामदारहरू र तिनीहरूका परिवारहरूको लागि कानुनी स्थिति र संरक्षण प्रदान गर्दछ। जबकि यी बिलहरू हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि महत्वपूर्ण निर्माण ब्लक्स हुन सक्छन्, ती अन्तिम लक्ष्य होइनन्। २०१ को अमेरिकी नागरिकता ऐनलाई लिएर क Congress्ग्रेसले अगाडि बढ्नुपर्दछ, जसले व्यापक सुधारको प्रस्ताव गर्दछ जसले ११ करोड अप्रमाणित आप्रवासीहरूलाई नागरिकताको बाटो प्रदान गर्दछ।
यी लामो समयदेखि देखिएका अवरोधहरू हटाएर जसले लाखौंलाई छायामा धकेल्छ, आप्रवासीहरूले उनीहरूको वित्तीय जीवनलाई अझ पूर्ण र सम्मानका साथ पुनर्निर्माण गर्ने अवसर पाउन सक्दछन्। तिनीहरूको वित्तीय सुरक्षा पुनर्निर्माण गर्न उनीहरूको जीवनमा वित्तीय स्थायित्व हुन सक्छ, र पश्चात महामारी पछि पुन: प्राप्तिमा लड्न सक्ने मौका छ।
हाम्रो काम सम्पन्न भएको छैन - हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न आग्रह गर्नु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो। हामीले सबैका लागि राहत र नागरिकता प्रदान गर्नु आवश्यक छ यदि हामी वास्तवमै सबैको लागि काम गर्ने एउटा समान संसारको पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छौं भने।